Sina China CPLA Kitapo vita amin'ny fanavaozana azo antoka plastika - Kitapo vita amin'ny kitapo azo antoka Gianty
Ny kitapo fitaovana ilaina amin'ny kitapo, fitsangatsanganana na fitsangatsanganana. Ny antson-tsika vita amin'ny mavesatra, fork, sotro ary napkin fotsy dia miditra ao anaty fonosana azo itambesana. CPLA mafana vita amin'ny laisoa hafanana dia fanavaozana plastika. Tsara hatramin'ny 85 ℃. Mahatsoratra miloko tanora fotsy.
Kitapo vita amin'ny kapoaka azo tanterahina dia tsy maintsy ilaina ho an'ny fananganana fitrandrahana mitady hampihenana ny diany karbônina ary mandeha maitso! Ny kitapo CPLA dia vita amin'ny PLA crystallized na plastika miorina amin'ny katsaka. CPLA dia loharanom-baovao azo havaozina satria voajanahary ny tontolo iainana rehefa mandeha ny fotoana, ary manome fanoherana hafanana bebe kokoa noho ny PLA nentim-paharazana. Ny PLA dia mijoro amin'ny asidra polylactic ary manolotra safidy hafa tsara amin'ny vokatra plastika nentim-paharazana.
Ampiasao ny kitapom-basy mba hanolorana ny mpanjifa ny voasarim-bidy sy kojakoja ilain'izy ireo hahafinaritra azy ireo! Avy amin'ny gadona CPLA, antsy ary sotro ho amin'ny napkin, nofonosina ireto kitapo mora ireto ka ny mpanjifa dia mahazo fonosana amin'ny fahadiovana izay azon'izy ireo mandeha.
Ny fonosanay tsy mety amin'ny fanontana. Ny kitapo dia azo asiana marika avy amin'ny tahiry farafahakeliny bitika 200 000 sombiny. Manolotra kitapom-batsy isan-karazany izahay arakaraka ny takian'ny mpanjifa. Azonao atao ny misafidy amin'ireo singa amin'ny tsenanay ary mamaritra ny zavatra irinao tianao. Raha mila fanazavana fanampiny, dia afaka mandefa ny fanontanianao amin'ny info@ecogianty.com.
Item Kitapetaka ho an'ny CPLA 7 santimetatra miaraka amin'ny kitapo azo antoka
Bag ny kitapo Onja foanana
Haben'ny baoritra 50 * 22 * ​​47cm
Item Kitapety vita amin'ny CPLA 6,5 santimetatra miaraka amin'ny kitapo azo antoka
Item Kitapety vita amin'ny CPLA 6 santimetatra miaraka amin'ny kitapo azo antoka
Haben'ny baoritra 50 * 22 * ​​45cm
Previous: CPLA Kit-namboarina azo avy amin'ny plastika tsy misy vita amin'ny plastika - kitapo taratasy
Manaraka: Boaty fivarotana kapoakan-tsakafo CPLA miaraka amina boaty famafazana fampisehoana